Tababare Allegri oo helay war aad u wanaagsan kahor kulanka AC Milan – Gool FM
Dajiye April 5, 2019
(Italy) 05 Abriil 2019. Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa helay war aad u wanaagsan, kadib markii ay dib ugu soo laabteen tababarka qaar ka mid ah ciyaartoydiisa ee dhaawac kaga maqnaa, waxayna arintaan imaaneysaa kahor kulanka adag ay Sabtida kula ciyaari doonaan Milan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in saddexda xidig ee kala ah Mario Mandžukić, Paulo Dybala iyo Spinazzola ay dib ugu soo laabteen tababarka kooxda Juventus, kahor kulanka Sabtida.
Saddexdan xidig ayuu wargeyskan caanka sheegay inay si wanaagsan kaga soo kabteen dhaawacyadii kala duwanaa ee soo gaaray, dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay.
Mandžukić ayaa ku seegay kulankii Cagliari sababa la xiriira hargab uu qabay, halka Dybala uu la maqnaa dhibaato dhanka lugta ah, sidoo kale Spinazzola ayaa isna kaga maqnaa garoomada dhaawac dhanka jilibka ah.
Sida laga soo xigtay wrgeyskan, tababare Massimiliano Allegri ayaa ugu horeyn ku qiimeyn doona xaalada xidigihiisa tababarka ugu dambeeya ay sameyn doonaan maanta oo Jimco ah, kahor kulanka ay bari oo Sabti ah la ciyaari doonaan kooxda AC Milan.
Jurgen Klopp oo si cad uga hadlay fikirkiisa ku aadan awooda Manchester City